एनआरएन युकेको अध्यक्ष दाबी गर्ने महिला के भन्छिन् ? | We Nepali
एनआरएन युकेको अध्यक्ष दाबी गर्ने महिला के भन्छिन् ?
२०७२ साउन २७ गते २२:४०
एनअारएन युकेमा अध्यक्ष पदकी दाबेदार कल्पना अाङबुहाङ
लण्डन । एनआरएन युकेको स्थापनाको एक दशकमा पहिलोपटक एउटी महिलाले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिन लागेकी छिन् ।
‘रानीको देश’ भनेर चिनिने बेलायतमै हालसम्म कार्यकारी (प्रधानमन्त्री) पदमा अहिलेसम्म एकजना मात्र महिला पुगेकी छिन् । एनआरएनमा उपाध्यक्ष, सचिव पदमा महिलाहरु पुगे पनि अध्यक्ष पदमा भने कसैले अहिलेसम्म अाँट्न सकेको थिएन । हुनत बेलायतका अन्य सामाजिक संस्थाहरुमा पनि महिला नेतृत्व कमजोर छ । तीन दशकअघि स्थापित नेपलिज डक्टर्स एसोसिएसनले हालै मात्र महिला अध्यक्ष पाएको छ ।
एनआरएन युकेकी वर्तमान कार्यसमिति सदस्य कल्पना आङबुहाङले एनआरएन युकेको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने हिम्मत गरेकी छिन् ।
ताप्लेजुङ, हाङपाङमा जन्मिएकी कल्पनाले धेरै समय हङकङमा बिताइन् । १३ वर्ष हङकङ बसाइमा उनले थुप्रै सामाजिक र क्षेत्रीय संस्थाहरुमा काम गर्ने अवसर पाइन् । ताप्लेजुङ–हङकङ समाज, किरात याक्थुङ चुम्लुङ, आदिवासी जनजाति महासंघ लगायतका संस्थामा अनुभव लिइन् । उनको सामाजिक सेवाको कदर गर्दै ‘आदिवासी चेली सम्मान’ सन् २००० मा दिइएको थियो ।
सन् २०१० मा युके आएपछि उनी किरात याक्थुङ चुम्लुङ, किरात माङ्गेना चुम्लुङ, बिगेसो लगायतका सामाजिक संस्थामा आवद्ध भइन् । राजनीतिक रुपमा पनि उनी सक्रिय भइन् । कलासंगीत मन पराउने उनले ‘आमा’ नामक गीति क्यासेट पनि निकालेकी छिन् । थप ९ गीतहरुको नेपालमा भिडियो सुटिङ गरेर युके आएकी उनी ‘आमा–२’ नामक अर्को गीति क्यासेट निकाल्ने तरखरमा छिन् ।
‘एनआरएन युकेमा किन अध्यक्ष पदमै उम्मेदवारी दिनुभयो’ भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भनिन्, ‘एनआरएन युकेमा सधैँ पुरुषहरुले मात्र नेतृत्व गर्ने प्रवृत्ति छ । महिलाहरुलाई सदस्य, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष दिने, खादा लगाउने, ब्याज लगाउने, खाजा बाँड्ने काम दिने गरिएको छ । यस्तो प्रथा तोड्न मैले उम्मेदवारी दिन लागेको छु ।’
‘महिलाहरुको मनोबल उकास्न र महिलाहरुले केही गर्न सक्छन् भन्ने प्रमाणित गर्न चाहन्छु’ उनले भनिन् । एनआरएन युके आर्थिक रुपमा डाँबाडोल अवस्थामा पुगेको, जसको हातमा पैसा र पावर छ उसले मात्र संस्था चलाउने अवस्थालाई आफूले परिवर्तन गर्ने उनले बताइन् ।
एनआरएनलाई नयाँ खालको संस्था बनाउने उनले दृढता व्यक्त गरिन् । हाल मस्यौदा अवस्थामा रहेको नेपालको संविधानमा गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक अधिकारविहीन नागरिकता दिने प्रावधान राखिएकोमा उनले असन्तुष्टी व्यक्त गरिन् । ‘राजनीतिक अधिकार बिनाको नागरिकता दिइनु र मताधिकारबाट वञ्चित गराइनु भनेको अनागरिक सरह हो’ उनले भनिन् । आफू एनआरएन युकेको नेतृत्वमा निर्वाचित भएमा राजनीतिक अधिकारसहितको नागरिकताका लागि विशेष पहल गर्ने उनको योजना छ ।